Sitecore Inounza Zvemukati Management kune Akadhindwa Mabrochure | Martech Zone
Mushandirapamwe wekushambadzira wekugadzira hupenyu hwekutenderera, kutanga nekufungisisa kwepfungwa uye kutambanudza kuburikidza nechikamu chekusimudzira kusvika kumushumo wekupedzisira, data sheet, bhurocha, katarogu, magazini kana chero chinhu chinosemesa uye chinodya nguva.
Sitecore, mutungamiri wemusika muinternet zvemukati manejimendi sisitimu software, akaburitsa tekinoroji nyowani iyo ine mukana wekugadzirisa maitiro aya ekudhinda zvinhu Sitecore's Adaptive Print Studio haingopa chete kudzora zvirinani pane zvese maitiro, asi inogona zvakare kucheka yekuvandudza hupenyu hwekutenderera nguva kubva pamazuva anofungidzirwa mazana maviri kusvika pasi pemazuva makumi maviri, uye zvakare kushandisa mashoma zviwanikwa kupfuura pakutanga!
Sitecore Adaptive Dhinda Studio inoisa se plug-in kuAdobe InDesign uye inova hubhu yepakati yezvose zviri muAdobe InDesign. Inopa dandemutande rewebhu kuunza pamwechete vagadziri vewebhu, vanogadzira, mamaneja ezvigadzirwa, vashambadziri uye nevamwe vese vanobatika kumushandirapamwe, kufambidzana nekubatana kwechikwata, manejimendi emitauro yakawanda, chengetedzo uye kudzora kwekufambisa uye dhirivhari ine simba.
Vagadziri vewebhu vanoisa basa ravo, kusanganisira dhizaini dhizaini uye marongero. Iyo suite inodhonza zvirimo kubva kuSitecore's Content Management System (CMS) kuenda kuInDesign zvakananga, uye inopa mukana wepamhepo kumutsetse webasa. Vagadziri vezvigadzirwa vanogadziridza katarogu zuva nezuva uye vanoita ongororo macircuit. Vasiri-vagadziri mukati mekushambadzira, kutengesa, sevhisi uye mamwe madhipatimendi akakodzera anogadzirisa maPDF uye anodhinda zvigadzirwa kubva mudhizaini kuti ubudise, kunyangwe pasina ruzivo rwehunyanzvi rwekugadzira zvinyorwa zveInDesign.
Neye dhizaini uye yekudhinda kugadzirwa kwezvinhu zvekushambadzira zvinowanzoita zvikamu makumi matatu kubva muzana zvebhajeti remushambadzi, zvakanakira tekinoroji iyi hazvidi kutaurwa. Iyo nguva yakachengetedzwa zvakare inobvumidza vashambadziri kuburitsa mushandirapamwe wavo padyo-chaipo-nguva, yakakosha mune yanhasi ine kukwikwidza uye kwemvura mamiriro umo kukurumidza kuchinjika uye maneuverability ndiyo kiyi yekubudirira.
Download bhurocha repamutemo kana kunyoresa kune kuratidzira online.
Tags: adaptive anodhinda studiocmscontent managementdhijitari kushambadzira masisitimunzvimbomidziyo